Isitudiyo esithandekayo enhliziyweni yeCassis - I-Airbnb
Isitudiyo esithandekayo enhliziyweni yeCassis
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Romain
Lokhu studio kuhle isendaweni enhle inhliziyo isikhungo esingokomlando Cassis futhi kuyokusiza ukuba eduze zonke izitolo kanye nemisebenzi anikezwa kule ndawo enhle kakhulu (zonke izitolo, izimakethe nezitolo ezinkulu kukhona abaninimhlaba abasondele ngo 100m; ethekwini lolwandle nazo zifinyeleleka ngezinyathelo ezimbalwa).
Leli fulethi elinesitezi elilungiswe ngokuphelele endlini endala yedolobhana lisemgwaqweni othule kakhulu futhi omuhle wabahamba ngezinyawo. It sakhiwa ekhishini sikuhlomele ngokuphelele, umbhede retractable zazo kwanele ucindezela inkinobho ye-remote ukwenza kubonakale futhi zinyamalale (entsha izinga okusezingeni eliphezulu zokulala), endaweni lounge kuhlanganise usofa Convertible. Ngeke zihambelane ingane noma i-osemncane ubuthongo, indlu yangasese ukhululekile (i-walk in eshaweni) futhi wonke Izinsiza ezidingekile kokuhlala ezimnandi (umshini wokuwasha, wiFi, i-TV, i-DVD, yegeyimu, insimbi, umshini ikhofi, teapot, combi kuhhavini / i-microwave, imidlalo yebhodi, izincwajana zemisebenzi ehlukahlukene ezungezile, ama-pétanque triplets, njll ...). Kunezindawo zokupaka izimoto eziningana eduze nendawo yokuhlala.
Njengoba izungezwe i-semvelo lapho zikaphayini amahlathi, ocher noma amatshe amhlophe, ehlanzeni izivini masimu ukuthi elula lubhekisele oLwandle iMedithera nibuthana ndawonye, Cassis ivikelwe izikhumbuzo ezimbili zemvelo ukuthi kukhona Cap Canaille (okusezingeni eliphezulu ngaphezulu eweni laseThire elingasolwandle Europe) elikhazimulayo ku i-mistral kanye ne-Calanques ye-limestone emhlophe.
"Yeka iParis, ibizo elithi Cassis, ukusho ukuthi: ayizange iphinde ibukeke"
Lawa magama avela kuNobel Prize for Literature, uFrédéric Mistral yedwa ahumusha ukukhanga okukhulu uCassis anakho kubo bonke abaya lapho. Leli chweba elincane lokudoba, eliphakathi kwezindawo ezimbili zemvelo ezingavamile (i-Calanques massif edumile kanye ne-Majestic Cap Canaille) linikeza izivakashi indawo egxile eProvence kanye neMedithera.
Umlingo usuvele usebenza emgwaqeni omncane oholela edolobhaneni nomoya phakathi kwezivini nehlathi likaphayini. Ubuhle bubonakala ngokuhamba emigwaqweni emincane nezikwele ezigcwele izindlu zabadobi ezimibalabala. I-Cassis izomaka kuze kube phakade amehlo alabo abathola itheku, izikebhe zalo kanye namasimu akhona okokuqala ngqa.
itholakala njalo futhi inomusa ukuphendula imibuzo yakho, okungcono nge-SMS
Inombolo yepholisi: 13022000257F3